FAMPIELEZAN-KEVITRA ANY ANTSIRANANA : Tsy nisy mpiraharaha sy nakorain’ny olona ny karnavalin’ny kandidà N° 25
Nanatanteraka karnavaly tamin’ny alalan’ ny filaharan’ny fiara ireo mpomba an-dRavalomanana taty Antsiranana, ny folakandron’ ny talata 4 desambra teo. 5 décembre 2018
Raha tokony tamin’ny roa ora sy sasany ny fotoana nomena ny olona izay noentanina tamin’ ny alalan’ny hiakakiaka ny mantsanan’io dia teo amin’ny dimy ora vao tanteraka izany.
Mazava araka izany ny antony raha ny fahitana ny tsy faharisihan’ olona raha tsy hilaza fa tsy misy namaly ny antso, afa-tsy ireo nahita ranondranony tamin’ ny fitondran’ity kandida laharana 25 ity. Tahaka ny depioteny, ben’ny tanàna tamin’ny fotoan’androny, sefo Cisco, ary ireo mpampianatry ny oniversite vitsivitsy azo isain-tanana.
Ankoatra izany dia foana tsy nisy olona ireo kamiao roa lehibe efa nomanina tamin’ izany, fa ireo fiaran’ireo mpandraharaha mpisolelaka sy ireo voa-tanisa ambony ireo no nitety tanàna. Kiakiaka toy ny hoe "Aller zahay tsy mila" no nasetrin’ireo vahoaka ireto nitety tanàna hanentana olona hifidy an-dRavalomanana ireo.Nibaribary araka izany ny tsy fitiavan’ny vahoaka aty Antsiranana an’ity kandidà laharana 25 ity. Efa babon’ny kandida laharana faha-13 ny fon’ny zanak’ Antsiranana, izay sahy nilaza fa ny lasa tsy mba fanadino tamin’ny jadona nataon-dRavalomanana.
Raha ilay fikambanana iray nentina natao fitaovana handresy lahatra ny vahoakan’i Diego no resahina dia azo ambara ary tsy takona afenina fa tsy nahasarika olona , hatramin’ireo mpikambana ao anatiny aza tsy niara-dia raha hanohana an-dRavalomanana. Nanambara ny renim-pianakaviana iray sendra mpanao gazetinay nandritra io fotoana io fa "koa za edy tsisy andra hifidy Ravalomanana, na sarinazy efa milanja ankanjo ke mila ampilanja antegna akanjo koa izy hitondra eo. Ninaka Andry Rajoelina ary maro an’isa koa hifidy Zandrikely io koa aty Diego fo".
Nisy ambara ihany koa ireo mpino silamo mano-loana ny zava-misy, izay sahy nanambara fa tsy fatao fitaovana politika ny mpino silamo, fa izay mahazo ranondranony ihany no sahy mitonina amin’ny anaran’ny silamo.
Tsy vitsy ireo voan’ny sesitany tsy nahavita tonga taty Antsiranana nandritra ny 7 taona nitondran’io kandida llaharana 25 io, izao indray sahy manohana an’azy.